Ny fampiasana inverter compressors efa be hanatsarana ny fahaiza-condensing vondrona, azo itokisana toy ny avo, feo ambany sy ny angovo famonjena, ka dia ho be ampiasaina amin'ny efitrano mangatsiaka sy fisehosehoana sns
Taizhou Nanfeng hatsiaka-Chain orinasa voafetra dia natsangana tamin'ny 1999, izay specializes amin'ny fampandrosoana, fanamboarana sy ny varotra ny refrigeration fitaovana. Ny orinasa fototra vokatra no DC inverter condensing vondrona, Danfoss ampy fitaovana tanteraka condensing vondrona, avo lenta condensing tarika sy ny sisa. Ny DC inverter condensing tarika dia tena Super Energy fahavaratra (40% -60%), Super Mangina (toy ny ambany toy ny 45dB) sy ny sisa. Danfoss ampy fitaovana tanteraka condensing tarika dia azo itokisana avo, avo fahombiazana, mafy mateza sy ny tombontsoa hafa.
Ny telo andro ao amin'ny Shanghai 2019 Refrigeration Fampirantiana Iraisam-pirenena dia nifarana tamin'ny faha-14, April.In ny Fampirantiana, Taizhou Nanfeng Cold-Chain CO., LTD tao an-manontolo jereo vaovao "28 Iraisam-pirenena Refrigeration Exhibition". Misy be dia be ny vokatra tao amin'ny exhibition.DC mpankafy hihena condensing ...
Iza moa izahay? tambajotra fifandraisana antsika ny varotra asa
Compressor Air Cooled Condensing Unit, Copeland Compressor Condensing Unit, Tecumseh Compressor Condensing Unit, Compressor Condensing Unit, Scroll Compressor Condensing Unit, 5hp Compressor Condensing Unit,